သုတကမ္ဘာ: ကမ္ဘာ့အလှဆုံး ပန်းခြင်းများရဲ့ ဥယျာဉ်
ကျွန်တော် သိသမျှ၊ ဖတ်ဖူးသမျှလေး တွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖြစ်နေစေဖို့နဲ့ အများသူငှာလည်း ဖတ်ရှုမှတ်သားနိုင်စေရန်သာ ဒီဘလော့လေးမှာ တဆင့် ပြန်လည် မျှဝေတင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်...။
လာရောက်လည်ပတ်သူအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ ...
ကမ္ဘာ့အလှဆုံး ပန်းခြင်းများရဲ့ ဥယျာဉ်
သိပ်ကိုလှပ ခမ်းနားတဲ့ ပန်းခြံကြီးတစ်ခုထဲ အလည်သွားကြည့်ကြပါစို့ ။ အဲဒီ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးကတော့ ကန္တာရထဲက အိုအေစစ်လို့ ပြောလို့ရလောက်အောင်ဘဲ ပူပြင်းခြောက်သွေ့လှတဲ့ UAE နိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုကို အံတုပြီး ပန်းမျိုးစုံလင်စွာ လန်းဆန်းပွင့်ဝေနေအောင် အထူးပြင်ဆင်ထားတဲ့ Al Ain Paradise အမည်ရ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးပါ။ Akar မြေယာရှုခင်း ပြုပြင်အလှဆင်ရေးလုပ်ငန်းက တာဝန်ယူကာ အလှဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခင်ကတော့ စတုရန်းပေ ၇၀၀၀ခန့်သာ ကျယ်ဝန်းသော်လည်း ခုချိန်မှာတော့ စတုရန်းမီတာ ၂၁၀၀၀ အထိကျယ်ဝန်းလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ လျှောက်လမ်းများ၊ ကော်ရစ်ဒါများဟာ အရှည် စုစုပေါင်း ၂၄၀၀ မီတာခန့် လှပခမ်းနားစွာ ရှိနေပါတယ်။
The Guinness World Records notice
ပန်းခြံထဲသို့ အလည်ရောက်ရှိလာကြသော ကမ္ဘာတလွှားမှ ဧည့်သည်များစွာတို့က အရောင်မျိုးစုံလင်လှသော ပန်းပွင့်သော သန်းပေါင်းများစွာကို အခင်းအကျင်းမျိုးစုံဖြင့် တစ်နေရာထဲမှာ မြင်တွေ့ရတာဟာ အလွန်ထူးခြားလှတဲ့ မြင်ကွင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရောက်လာသူတွေထဲမှာ စည်းကမ်းရှိပြီး ပန်းတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ ဧည့်သည်တွေ ပါဝင်သလို ပန်းခြံထဲမှ အပင်တွေ ပန်းအိုးတွေကို ဖျက်ဆီးသွားသူတွေ၊ ခိုးယူသွားသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ယခုအခါ စည်းစနစ်ကျနတဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ကို တတ်ဆင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ပန်းခြံကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ပြုလုပ်လိုသူတို့ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း Akar မြေယာရှုခင်းပြုပြင်ရေး တာဝန်ခံ အထွေထွေမန်နေဂျာ Abdul Nasser Rahhal က ပြောပါတယ်။ ပန်းခြင်းမှာလည်း ယခင်က ၂၅၀၀သာ ရှိသော်လည်း ယခုအခါ ၂၉၆၅ခြင်း ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနောက်ပိုင်း ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး အရောင်အသွေးစုံလင် ပန်းမျိုးစုံဝေဆာနေတဲ့ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးရဲ့ ပုံကို အောက်မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြည့်ပါ ။
အင်မတန်မှ ပူပြင်းခြောက်သွေ့ပြီး သဲကန္တာရဒေသဖြစ်တဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာမှာ အရောင်အသွေး အမျိုးအစား စုံလင်လှတဲ့ ပန်းပေါင်းစုံတို့ ဖူးပွင့်ဝေဆာနေပုံဟာ အိမ်မက်တစ်ခုပမာ မယုံကြည်နိုင်စရာ ကောင်းလွန်းလှသော်လည်း ငွေကြေးချမ်းသာပြီး ငွေကို ရေလိုသုံးနိုင်၊ ဖြုန်းနိုင်တဲ့ နိုင်ငံအတွက်တော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖြစ်တစ်ခုကို လက်တွေ့ ဖန်ဆင်းပြလိုက်နိုင်တာဟာ ငွေကြေးတန်ခိုးသြဇာရဲ့ ပြယုဒ်တစ်ခုဘဲ မဟုတ်ပါလား။
Posted by မောင်သုတ
ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အလံ မရောကြစေရန်
ခုတလော ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီကုလားတွေရဲ့ ကျူးကျော်စော်ကားမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး အရမ်းကို ...
ပါရမီ (ဆယ်ပါး - အပြားသုံးဆယ်) ၁။ ဒါန ပါရမီ= ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလှူဒါန်းမှုကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း။ ၂။ သီလ ပါရမီ= သီလစောင့်ထိန်းမှုကို ဖြည့်ကျင့်ခြင...
တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု - ၁၃၅မျိုး
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအားလုံး မြန်မာပြည်ကြီးမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ၁၃၅ မျိုးရှိတယ်လို့သာ အကြမ်းဖျင်းသိကြပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဘယ်သူမှသတ...
မြန်မာတို့ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော် ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်သောနေ့၊ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ကိုယ့်ကြငှန်းကို ပြန်ရသောနေ့ ဇန်န၀ါရီ ...
အဌာရသ (၁၈)ရပ် ဟူသည်
၁။ အကြားအမြင်သုတ အတတ်၊ ၂။ ဓမ္မသတ်တတ်ကျွမ်းမှု အတတ်၊ ၃။ သချာင်္ဆိုင်ရာ အတတ်၊ ၄။ စူး၊ ဆောက် အစရှိသော ဗိသုကာ အတတ်၊ ၅။ လောကနီတိ အတတ်၊ ၆။ ယတြာ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း သိထားတော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ... ဖတ်ဖူးတာလေးပါ။ 1. ပထမဆုံး သမ္မတ = စဝ်ရွှေသိုက် 2. ပထမဆုံး ၀န်ကြီးချုပ် = ဦး...
ဒါလေးတွေကတော့ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ ဖတ်မိတာလေးတွေပါ။ ဘယ်သူစုဆောင်းထားတာလဲ ဆိုတာ သေချာတော့ မသိပါဘူး...။ အားလုံးသိစေဖို့ ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်...။ ...
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှ ၁၉၄၈၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် လူသားတိုင်း ရသင့် ရထိုက်သော ခံစားထိုက်သော အခွင့်အရေးများကို လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းအ...
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ရုံနှင့် အင်မတန် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းမည့် အကြောင်းအရာဖြစ်မှန်း စာဖတ်သူတို့ သိရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ယင်းသို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ခွဲ...
မှဲ့ နှင့် ကင်ဆာ
မှဲ့ဆိုတာ အရေပြားပေါ်မှာ ပေါက်လေ့ရှိပြီး လူအများစုမှာ မှဲ့ ၁၀ လုံးနဲ့ ၄၀ကြား ရှိတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ ယေဘုယျ အားဖြင့် အသက် ၄၀ အထိ တိုင်...
ဖတ်ဖူးသမျှ၊ သိသမျှလေးများကိုသာ ပြန်လည်မျှဝေပေးနေတဲ့ လေ့လာသင်ယူဆဲ လူငယ်တစ်ဦးပါ...
စင်ကာပူက ကမ္ဘာ့တတိယ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာ
စိတ်ဓာတ်မကျအောင် ကူညီပေးမည့် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်း...
မြန်မာဆေးပညာရှင် ဦးဆောင်သော ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိချက် အ...
ကမ္ဘာတစ်လွှား ရုံးခန်း ဒီဇိုင်းဆန်းများ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လှပ ဆန်းကြယ်သော လမ်းများ
ဘာသာစကားကြီး ၁၁ မျိုး ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုနိုင်တဲ...
နံ့သာ ၁၀ ပါးထဲက ၁ ပါး
ကျန်းမာရေး ကောင်းစေတဲ့ ကျောက်ကို ၀တ်ဆင်သူတွေ သတိပြ...
အနေကဇာမတင်တဲ့ ရုပ်ပွားတော်ကို ကိုးကွယ်သင့်/မသင့်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလှဆုံး တံတားများ (၂)
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလှဆုံး တံတားများ (၁)
စိတ်တို၊ ဒေါသဖြစ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး....
"တစ်ကြိမ်အောင်မြင်ရင် ရပြီ" (KFC ရဲ့မူလအစ...)
ငွေစက္ကူလေးများမှ ရုပ်ပုံ၊ ရှုခင်းများ
Romantic အဆန်ဆုံးနေရာ နေရာဒေသများ
ကားလမ်းမပေါ်ဖြတ်၍ တည်ဆောက်ထားသော လေဆိပ်
လက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့ လူသိနည်းတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်များ
ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူသိနည်းသော အကြောင်းအရာမျ...
ကမ္ဘာ့ ပညာတတ်အများဆုံး ၁၀ နိုင်ငံ
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၁၄ ခု၏ အလံများ
နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေး ၁၀၀ ကျော်ကို ခွဲစိတ်ေ...
ကွယ်ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်နေသည့် မြန်မာတို့ရဲ့ ချစ်စရာ...
အချို့ဘုရားအပေါ် မိန်းမ မတက်ရ
၃၈ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတော်
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနည်းပညာ Logo များနှင့် အမှတ်တံဆ...
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နှင့် အာရှအကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်မျာ...
သင်ယူဖို့ အခက်ခဲဆုံး ဘာသာစကား ၅ ခု
ကျောင်းစာကို ကွန်ပျူတာဖြင့်ရိုက်နှိပ်ခြင်းထက် ကိုယ...
ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာလို့ ချောကလက် ပေးကြတာလဲ?
၁၈၇၈ ခုနှစ် နန်းတွင်းအာဏာသိမ်းမူ
သားကောင်ရှာ မုဆိုးတစ်သိုက်ရဲ့ မြေဇာပင်လေးများ
MIET51 (for C++ & Linux)
သုတကမ္ဘာ. Theme images by homebredcorgi. Powered by Blogger.